Nandeha moto avy namita iraka: Polisy monisipaly roa maty voafaokan’ny 4X4 | NewsMada
Misaona ny kaominina ambonivohitra Sambava. Polisy monisipaly miisa roa: lehilahy iray vao 25 taona sy vehivavy 37 taona no maty tsy tra-drano ,omaly, noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ireo tao an-toerana. Nofaohin’ny 4X4 ny moto nitondra azy ireo
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina no niseho tao amin’ny RN5A omaly maraina. Maty voafaokan’ny 4X4 tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany ny polisy monisipaly miisa roa miasa ao amin’ny kaominina ambonivohitra Sambava.“Avy namita iraka tao Ambia ireo polisy monisipaly ireo. Nandeha moto izy ireo ary voafaokan’ny fiara tsy mataho-dalana nandeha mafy avy any Antalaha ho any Sambava”, hoy ny fanazavan’ny polisy ao an-toerana. Avy nanaraka ny ben’ny Tanànan’ny kaominina ambonivohitra Sambava tany Ambia izy mianadahy ireto izao tra-doza izao, hoy ny loharanom-baovao iray hafa.
Nambarany fa teo amin’ny farany faritra Ambia, eo amin’Antanandronono no niseho ny loza. Vokany, nipitika sy nianjera mafy avy eny ambon’ilay moto ireo polisy ka maty tsy tra-drano tamin’izany ilay vehivavy 37 taona noentina. Mbola nialana nenina nentina teny amin’ny hopitaly kosa ilay lehilahy vao 25 taona monja. Saingy tsy tana ny ainy ary maty ihany koa io mpitondra moto io.
Taorian’ny loza, voatazona vonjimaika ao amin’ny kaomisarian’i Sambava ny mpamily ny fiara. Nogiazana ihany koa ilay fiara 4×4 nahavanon-doza. Fantatra tamin’izany fa tsy nahenoana fofon-toaka ny mpamily. Malalaka sy mahitsy ihany koa ny lalana, antony nahatonga ny fiara nandeha mafy, hoy hatrany ny fanazavana voaray.
Efa misy ny fandaharam-potoana ho an’ny fiaretan-tory atao ao amin’ny Lapan’ny Tanàna ao Sambava sy ny fandevenana ireo nofo mangatsiaka anio.